गुरु देवायः नमो नमः ! – Imagination
@codeezer Do you think they are simulating the noise inside the stadium too? Would be nice if they could let the so… twitter.com/i/web/status/1… 21 hours ago
Is this noise only added in streaming or they are actually simulating noise inside the stadium. I wonder #DerKlassiker 21 hours ago
बुझे त भै' गो' नि हन तँहरूले। अनि फेरी किन कचकच गर्छस् क्या तँहरू त्यस्सै? twitter.com/kedar_sharmaa/…4days ago
म विभिन्न स्थानहरूमा अनेकौं प्रकारले वर्षौंसम्म भौंतारिएँ । भौतारिँदा, भौतारिँदा एक दिन मैले आफूलाई बौद्धनाथ पछाडि रहेको सेतो गुम्बामा पाएँ । म त्यहाँ जाउँ भनेर घरबाट निस्किएको थिइनँ, बरालिँदा बरालिँदै मैले आफूलाई त्यहाँ पाएँ भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । गुम्बामा, मेरो अनुहार चिनेको एक जना लामाले भने, ‘तपाईंले चोकीनिमा गुरुको दर्शन गर्नुपर्छ ।’ त्यो लामाको पछि लागेर म चोकीनिमा रिम्पोचेका अगाडि पुगें । उहाँले मलाई अंग्रेजीमा सोध्नु भयो, ‘हु आर यु ? (तिमी को हो ?)’ मलाई काठमाडौं सहरमा वा नेपालका कतिपय स्थानहरूमा तपाईं को हो भनेर प्रश्न सोधेको प्रायः कमै अनुभव छ । मैले झर्को मान्दै आश्चर्य र अहंकार मिश्रति स्वरमा जवाफ दिएँ, ‘आई एम विजयकुमार ।’ सुनेर रिम्पोचे मुसुक्क हाँस्नु भयो र फेरि सोध्नु भयो, ‘आर यु विजयकुमार अर विजयकुमार इज योर नेम ? (के तिमी विजयकुमार हौ अथवा विजयकुमार तिम्रो नाम हो ?)’ त्यो प्रश्नले मलाई दस हजार भोल्टको करेन्टले भन्दा बढ्ता झट्का दियो । मैले कहिले सोचेको थिइनँ कि म विजयकुमार हुँ अथवा त्यो मेरो नाम मात्र हो ? मेरो मन र मुहारमा छाएको अनिश्चयको बादल देखेर रिम्पोचेले भन्नुभयो, ‘तिमी त आफूलाई निकै जान्ने-सुन्ने ठान्दछौ । मलाई यति मात्र भन कि तिमी विजयकुमार हौ वा त्यो तिम्रो नाम मात्र हो ?’ चोकीनिमाको यो साधारण झैं सुनिने असाधारण गहराइको प्रश्नका अगाडि मेरो अहंकार लज्जावतीको झार झरेझैं झरिसकेको थियो । मैले विस्तारै यति मात्र भन्न सकें ‘खै रिम्पोचे, अहिले यसै भन्न सक्दिनँ कि म विजयकुमार हुँ वा त्यो मेरो नाम मात्र हो ।’ सुनेर उहाँ जोडले हाँस्नु भयो र भन्नुभयो, ‘केही हतार छैन, आज दिनभरि र रातभरि सोच । भोलि यही ठाउँ, यही समयमा फेरि भेटौं । प्रश्न उही रहने छ ।’ म चुपचाप कोठाबाट निस्कने बेला त्यहाँ बसेका एक जना सज्जनले मलाई व्यंग्यात्मक स्वरमा भने, ‘विजयजी तपाईंले टेलिभिजनमा कसैलाई प्रश्न सोधेपछि उत्तर दिन ३० सेकेन्ड समय पनि दिनु हुन्न । गुरुबाट तपाईंचाहिँ पूरै २४ घन्टा समय बक्सेको छ, भोलिचाहिँ उत्तर पक्कै लिएर आउनु होला नि ।’ यति भनेर ती सज्जन खितखित हाँसे । कुनै अरू ठाउँ भएको भए मैले त्यो बाजेलाई के पो जवाफ दिने थिएँ होला ! तर त्यस दिनचाहिँ आफ्नो पराजित अहंकारको घाउमा उसले नुन-खोर्सानी छर्केको महसुस गर्दै घर फर्कें । र, त्यस दिनभरि र राति अबेरसम्म रिम्पोचेले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोज्ने असफल प्रयत्न गरें । भोलिपल्ट निर्धारित समयमा सेतो गुम्बा पुग्दा मलाई आफ्नो ज्ञानको सीमितता र अहंकारको विराटता दुवैका विषयमा थोरबहुत महसुस भइसकेको थियो । रिम्पोचेले सोधे, ‘उत्तर ल्यायौ त ?’ मैले सानो स्वरमा जवाफ दिएँ ‘म क्षमाप्रार्थी छु रिम्पोचे ! मैले तमाम प्रयत्न गर्दा पनि उत्तर ल्याउन सकिनँ ।’ सुनेर रिम्पोचे एक करुणामयी मुस्कानका साथ भन्न थाले, ‘तिमीले आफूलाई क्षमाप्रार्थी होइन भाग्यमानी ठान्नु पर्दछ । भाग्यमानी यस अर्थमा कि तिमीले कमसेकम त्यो प्रश्नको बारेमा सोच्ने मौका त पायौ । अधिकांश मानिसहरू उनीहरू वास्तवमा को हुन् ? भन्ने सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्नका विषयमा एक क्षण पनि विचारै नगरी कैयौं पटक पृथ्वीमा आउने र जाने गर्दछन् । तिमीले कमसेकम त्यो प्रश्नका बारेमा विचार त गर्‍यौ । अब कुनै दिन गुरु रिम्पोचेको कृपा भयो भने उत्तर पनि प्राप्त गर्ने छौ । आऊ अब यात्रा थालनी गरौ ।’
यतिका वर्षमा, यति सब हुँदाहुँदै पनि, त्यतिका मौका पाउँदापाउँदै पनि म भने खासै रूपान्तरित हुन सकिनँ । किनभने मैले गुरुको शिक्ष्ााले हृदयले होइन मस्तिष्कले मात्र बुझेको रहेछु । मेरो हृदयमा र मेरो आचरणमा त्यो रत्तिभर प्रवेश गरेको रहेनछ । यो थाहा पाएपछि मेरो दुःख झनै बढेर गयो । मानिसले बाटै थाहा नपाउनु दुःखको कुरा हो तर बाटो थाहा पाएर पनि त्यसमा हिँड्न नसक्नाले अतृप्तताको झनै ठूला खाडल मनमा बनाउँदो रहेछ । तर सौभाग्यवश एकदिन राधेश्यामजीको सहयोगले मलाई १०० वषर्ीय महान् बौद्ध गुरु छयाट्टा रिम्पोचेको दुर्लभ दर्शन प्राप्त भयो । उहाँकै आशीर्वादले तीन वर्षअघि मैले आफ्नो मूल गुरु नामखा रिम्पोचे पाएँ । नामखा रिम्पोचेलाई देख्नेबित्तिकै मलाई महसुस भयो- अब भौतारिने दिन सकिए । शब्दमा बयान गर्न नसकिने एउटा अनुभूति पैदा भयो- अब मैले मेरो आध्यात्मिक खोज यी सद्गुरुका चरणमा विसर्जित गर्नु पर्दछ । नामखा रिम्पोचेले न मलाई कुनै उपदेश दिनुभयो नत केही सोध्नु भयो । उहाँको मौन उपस्थिति मात्रले मेरो मनका घाउहरूमा बिस्तारै मलम लगाएको शान्त अनुभूति हुन थाल्यो । उहाँको शान्त मुहारलाई हेर्दा ओशोका शब्दहरू सम्झिएँ ‘परम ज्ञान त निःशब्द छ । शब्दद्वारा त्यसलाई व्यक्त गर्नै सकिँदैन । तर चेतनाको जुन स्तरमा आज तिमीहरू उभिएका छौ त्यहाँसम्म पुग्न मैले बडा कष्टपूर्वक ओर्लिएर शब्दहरूको प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । होइन भने, अस्तित्वले आफ्ना गहनतम् रहस्यहरू ‘मौन’ द्वारा मात्र उद्घाटित गर्दछ । मौनबाहेक अस्तित्वका परम रहस्यहरूमा प्रवेश गर्ने अर्को कुनै द्वार नै छैन ।’
One thought on “गुरु देवायः नमो नमः !”